ओलीले प्रचण्डसँग भने, एमसीसी राष्ट्रघाती भए मैले किन अघि बढाउँथे ? - Himali Patrika	ओलीले प्रचण्डसँग भने, एमसीसी राष्ट्रघाती भए मैले किन अघि बढाउँथे ? - Himali Patrika
Himali Patrika प्रकाशित मिती - १२ फाल्गुन २०७८, बिहिवार
माओवादी केन्द्रका नेताहरुले भने एमसीसी राष्ट्रियताको मुद्दासँग जोडिएको हुनाले पहिले त्यसलाई असफल पार्न आग्रह गरेका थिए । ‘हामीले संसदबाट एमसीसी फेल भएपछि अरु बृहत्तर छलफल गरौँला भनेका थियौं,’ छलफलमा सहभागी माओवादी केन्द्रका एक नेताले भने, ‘उहाँले मैले एमसीसीलाई कहिले राष्ट्रघाती भनेको छु र भन्नुभयो । कुरा बुझ्दा एमाले र कांग्रेस निकै अघि बढेकोजस्तो देखियो ।’